Ime ụlọ ime Bucharest - Nobili Ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, imepụta, ahịa
Ọrụ imepụta ime obodo nwere ike ịdọrọ onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-akpọ oge na-aga na ọrụ nke a ụlọ ọrụ mmepụta ihe nakwa Emeghị atụmatụ ime obodo. Tinyere otu ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na ndị na-emepụta ihe, ị nwere ike ịmepụta ụlọ nrọ gị na Bucharest n'enweghị mgbalị ọ bụla. Ụlọ ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ bụ onye ndu ahịa na atụmatụ echiche ime ime si ime ime arụ ọrụ maka ụlọ, ụlọ, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa na Bucharest kemgbe 2008. Ihe ngwọta nke ndị na-emepụta ihe na-eme ka ndị ahịa wee hụ ìhè ọzọ na-adịghị mma. Onye ahịa nwere ike ịhọrọ ndị na-emepụta ihe ndị e ji mara ihe, oge a, eclectic, baroque, Mediterranean, ma ọ bụ ọbụna ngwakọta nke ụzọ maka ụlọ ma ọ bụ karịa nke obibi ya na Bucharest ma ọ bụ obodo ndị ọzọ na Romania. Tupu ịmalite ọrụ ahụ ime ụlọ maka ụlọ, obodo ma ọ bụ ụlọ na Bucharest, ndị na-emepụta ime ụlọ ha ga-arụ ọrụ iji kọwaa echiche na nhọrọ nke onye ahịa ma chee ha na ihe ngosi 3D. Ya mere, onye ahịa ahụ nwere ike ịhụ, nyochaa ma dezie ihe niile a ga-agbanwe n'ụlọ ya, ma n'èzí ma n'ime ụlọ. Ruo ugbu a, anyị na-enwe obi ụtọ maka 150 site arụ ọrụ ime ụlọ maka ụlọ ndị mara mma, ụlọ nke oge a na ụlọ elu ndị ọzọ n'oge ochie na ụlọ ndị ọzọ na Bucharest, Ilfov na obodo ndị ọzọ dị na Romania. Onye ahịa nwere ike ịgagharị mmepụta ihe ime ụlọ si ime ime iji ghọtakwuo ihe ụdị ihe owuwu a pụtara ma ghọta ike ọ gbanwere ime ụlọ ime ụlọ nakwa Emeghị atụmatụ ime obodo. Ndị ọkachamara anyị ime ime ga-emeghe anya gị na uche gị ma nyere gị aka na ntuziaka ndị dị mkpa maka nsonaazụ ikpeazụ iji mee gị obi ụtọ. Anyị na-arụ ọrụ kacha mma emepụta n'ọhịa ime ime, ya mere, ihe ọ bụla sitere na parquet ahụ, ime ụlọ ịwụ na faience, ọnụ ụlọ dị ndụ dị na porcelain, ihe eji etinye ọkụ, ngwa ngwa ụlọ na kpochapu ụdị ngwá ụlọ ga-abụ ndụmọdụ dị elu site na na-emepụta. Dabere na mmefu nke onye ahịa, onye nwere ike ịhọrọ ngwa ndị dị mkpa iji mee ka ime ụlọ dị mma, ime ụlọ nke oge a ma ọ bụ ọbụna kichin a na-eji ejiji. Mkpebi ahụ bụ kpamkpam, ihe nile na-amalite site na nhọrọ nke onye ahịa ahụ, ọrụ ahụ ejedebe ime ime na Bucharest dị n'aka otu ụlọ ọrụ pụrụ iche Emeghị atụmatụ ime obodo. Nobili Interior Design bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ime ime bụ nke nwere ọrụ 50 nke imewe ime na imewe na Bucarest, Voluntari, Otopeni, Pipera, Snagov na Izvorani.